Oge Ajọ Ifufe na Atlantic ga-enwe nkezi ọrụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Oge ajọ ifufe na Atlantic ga-enwe nkezi ọrụ
Oké ifufe bụ ihe ngosi nke ihu igwe, nke, site na onyonyo satịlaịtị, dị egwu n'ezie. Mana na ala ihe gbanwere. Ha nwere ike imebi nnukwu ihe, ruo n'ókè nke na a ga-enwe ọbụna ọnwụ.
Maka afọ a, dị ka ndị ọkachamara si kwuo, a na-atụ anya oké ifufe iri na abụọ na Atlantic, nke ise ga-abụ ajọ ifufe, abụọ n'ime ha siri ike, na oge ọrụ ha ga-abụ nkezi. Oge ajọ ifufe nke na-amalite na June 1.
N'afọ a, ịmalite ifufe ga-emetụta mmebi nke ihe omume El Niño na obere okpomọkụ dị na North Atlantic. Onye na-eme nchọpụta na onye na-ahụ maka ọrụ na Mahadum Steeti Colorado (CSU) Philip J. Klotzbach kwuru n’oge Mgbakọ Mba Na-ahụ Maka Ọnọdụ Ọnọdụ Ebe Ọwụwa Anyanwụ na South Padre Island, Texas, na ha tụrụ anya na enwere ike nwee oke ifufe. na-eme ọdịda mmiri n'ụsọ oké osimiri nke United States na Caribbean. Iji kọwaa nke ọma, o gosiri na enwere Ohere 50% na oke ifufe ga-efe Atlantic nke US, na ohere 30% na ọ ga-akụ Florida ma ọ bụ Ọwara Oké Osimiri Mexico. Banyere Caribbean, ohere ndị a 40%.
Klotzbach na ndị otu ya na-ebu amụma ha kwa afọ. A na-eme nnyocha a site na nyochaa afọ 29 nke akụkọ ihe mere eme banyere ifufe. Maka 2016, ha buru amụma banyere oké ifufe iri na abụọ, ọnụ, ga-arụ ọrụ maka ụbọchị 50. N’ime mmadụ iri na abụọ a, a ga-enwe ise ga-abụ oke ifufe, abụọ n’ime ha ga-esi ike.
Klotzbach kwukwara na nke ahụ Ọ na-ezuru oke ifufe iji mee ka ọdịda ya ka elere anya dị ka oge na-arụsi ọrụ ike maka ebe ahụn'agbanyeghị oke ifufe buru amụma banyere ifufe, ya mere ọ dị ezigbo mkpa ị atta ntị na ịdọ aka na ntị oge ka nsogbu ọ bụla ghara ịda.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Oge ajọ ifufe na Atlantic ga-enwe nkezi ọrụ
Kedu ihe bụ hydrometeor na gịnị bụ ụdị ndị bụ isi?